10 Toerana Indray Mandrakizay | Save A Train
an-trano > Travel Europe > 10 Toerana Indray Mandrakizay
Train Travel, Train Travel China, Train Travel Japana, Fiaran-dalamby any Norvezy, Train Travel Russia, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
Hiverina any amin'ny efitra, na midina any amin’ny haran-dranomasina lehibe indrindra eran-tany, eo ambanin'ny Northern Lights, ireo no 10 toerana haleha indray mandeha amin'ny fiainana. Noho izany, raha mitady fitsangatsanganana tsy hay hadinoina any Kenya ianao, na aiza na aiza eo anelanelan'i Mongolia sy Moskoa, dia tokony hijery ireo toerana ireo ianao.
Iray amin'ireo toerana bibidia sy epic farany eran-tany, Reserva nasionalin'i Masai Mara toerana indray mandeha eo amin'ny fiainana. Tsy nokasihin'ny sivilizasiona, Masai Mara dia toerana safari mahafinaritra. Ary, ny tahiry voajanahary no fonenan'ny fifindra-monina lehibe indrindra eran-tany, mamela marika isaky ny mpitsidika. Noho izany, nanatri-maso ny fifindra-monina lehibe; saka dia, zebra, ary bibidia maro hafa, metatra vitsivitsy monja miala amin'ny toeram-ponenany mahafinaritra voajanahary, dia traikefa nanova fiainana.
Noho izany, raha te handeha amin'ny fitsangatsanganana manova fiainana any amin'ny iray amin'ireo tahirin-javaboary manaitra indrindra eran-tany ianao, afaka misafidy ianao na miakatra eny amin'ny lanitra amin'ny balaonina mafana na amin'ny 4X4. na izany aza, Tokony hanomana ny fialan-tsasatry ny safari ianao eo anelanelan'ny Jolay sy Septambra, mba hanatri-maso ireo andiana bibidia mahavariana indrindra mitondra ny lalana sy ny tanin’i Kenya, nandritra ny fifindra-monina.
2. Toerana Indray Mandrakizay: Macchu Picchu
Miafina any amin'ny Tendrombohitra Andes, nilaozana fa tsy nanadino ny tanànan'i Machu Picchu. Ny sisa tavela amin'ny empira Inca dia miorina mafy mandritra ny taonjato maro, vonona ny hizara ny misterin'ny empira Peroviana amin'ireo mpitsidika an'arivony tonga isan'andro, an-tongotra, fiara fitateram-bahoaka, ary lamasinina.
Rehefa mitsidika an'i Machu Picchu, ho very hevitra ianao noho ny habeny sy ny toerana misy ilay tanàna fahiny. Ahoana no nanorenana sy nitahirizana an'io tanàna lehibe io teo afovoan'ny toerana tsy misy na aiza na aiza ao Però, mijanona ho mistery. na izany aza, Ny zava-miafina lehibe indrindra dia ny antony nandaozan'ny mponina an'i Machu Picchu. Noho izany, dia raisina an-tanan-droa ianao mba hanatevin-daharana ireo fitetezam-paritra maro ao an-toerana ary hiezaka hahita. Ary, dia hahita ny iray amin'ireo kolontsaina sy toerana mahavariana indrindra eto an-tany ianao. Noho izany, Aza hadino ny mamandrika ny dianao indray mandeha mandritra ny androm-piainanao mankany Machu Picchu ASAP 2022.
3. Fiaran-dalamby Trans-Mongoliana avy any Moskoa mankany Mongolia
Ny roa amin'ireo toerana tsy mampino indrindra eran-tany dia Siberia sy Mongolia. Noho ny fitaterana an-dalamby maoderina, amin'izao fotoana izao dia afaka mandeha any amin'ny roa amin'ny dia iray, amin'ny fiaran-dalamby Trans-Mongoliana. Miainga ao Moskoa, amin'ny alàlan'i St. Petersburg sy Lake Baikal, Efitra Gobi, ary tonga tao Beijing, ny Trans-Mongolian dia dia mahagaga.
Tsy vitan'ny hoe hanana fomba fijery mahatalanjona avy amin'ny varavarankelin'ny lamasinina ianao, fa hanana vintana tsy fahita firy ianao hiampita 6 zones time. Raha ity no iray amin'ireo ny fiarandalamby lava indrindra eran-tany, ny Trans-Mongoliana dia mendrika ny handeha amin'ny lamasinina. Noho izany, raha mitady aventure manova fiainana ianao, dia tokony hanomboka hanomana ny dianao mankany amin'ity toerana misy anao indray mandeha ity ianao mandritra ny fahavaratra manaraka.
4. Toerana Indray Mandrakizay: Tromso, Norvezy
Ny fihaonana amin'i Aurora dia traikefa manova fiainana ary ny toerana tsara indrindra amin'ity fihaonana mahafinaritra ity dia ao an-tanànan'i Tromso.. Ao afovoan'ny faritra aurora, any amin'ny Arktika Norvezy, afaka mahita ny fampisehoana jiro polar mahavariana indrindra eran-tany ianao. Spirals, taratra, ambainy, ary ny flickering ny hazavana voajanahary dia fisehoan'ny jiro polar, tsy hita afa-tsy amin'ny toerana avo, toy ny faritra Arktika sy Antarctica.
fotsiny 5.5 ora avy any Londres amin'ny lamasinina, tena mora tratrarina ity toerana indray mandeha ity. Mahavariana ny toerana afovoany, trano fisakafoanana lehibe, ary ny trano fisakafoanana dia mahasarika mpandeha avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny fotoana tsara indrindra hanatanterahana ny nofinofinao dia ny Desambra ka hatramin'ny Martsa ho an'ny fomba fijery tsara indrindra momba ny Northern Lights any Norvezy.
tany mafana, maitso, tony, Bali dia paradisa eto an-tany ary iray amin'ireo ambony indrindra 5 toerana haleha indray mandeha amin'ny fiainana. Trano misy tempoly fahiny, Kolontsaina Bali, mahatalanjona fialan-tsasatra ara-tontolo iainana Rentals, ary trano fonenana, miaraka amin'ny fomba fijery manaitra, Bali dia toerana fitsangatsanganana tsy hay hadinoina.
Noho izany, Ireo mpandeha mankany Bali dia mahatsapa ny fomba fijery sy ny atmosfera mahagaga indrindra eto an-tany, tsy lazaina intsony ny tany izay mahatonga ny olona tsy hiteny sy ho talanjona manoloana ny zavaboary be voninahitra. Ankoatry ny, lohasaha maitso mavana, ary mahatalanjona riandrano, mamorona sary sahala amin'ny carte postale sy toerana tian'ny rehetra aleha, farafaharatsiny indray mandeha eo.
6. Toerana Indray Mandrakizay: Ny Haran-dranomasina Lehibe, Aostralia
Mihinjitra mihoatra 900 nosy sy mihoatra noho 2000 km, ny haran-dranomasina lehibe any Aostralia dia toerana nofinofy ho an'ireo mpankafy antsitrika sy snorkeling. Any Queensland ny haran-dranomasina tsy mampino, aiza no ahitanao 1500 karazana trondro, biby mahagaga, ary vato harana mahafinaritra.
Toerana mahagaga ambanin'ny ranomasina ny Greater Barrier Reef. Noho izany, raha tsara vintana ianao, mbola afaka mahita zavaboary taloha milomano eo akaikinao ianao. Ary noho izany, entana ny kitapo, snorkeling na fitaovana antsitrika, amin'ny dia indray mandeha mandritra ny androm-piainana mankany amin'ny Great Barrier Reef any Aostralia.
7. Kapadokia, vorontsiloza
Ny mitaingina balaonina mafana eny ambonin'ny Cappadocia any Tiorkia dia fihetsehana mampitolagaga. Ary, raha eny amin'ny rivotra ianao, Hahita balaonina mafana miloko hafa sy ny faritra volkano any Kapadokia ianao. na izany aza, raha matahotra ny avo ianao, avy eo mijery ny balaonina mafana avy amin'ny efitranon'ny hotely na kafe ivelany, ho traikefa tsy hay hadinoina.
Ho fanampin'ny firotsahana adrenalinina ao anaty rahona, ho hitanao ny halehiben’ny tany tsy manam-paharoan’i Kapadokia. Ohatra, ny lohasaha Monks dia feno vatolampy miendrika setroka mitsangana manerana ny tany. Ary, ny trano sy fiangonana tamin'ny vanim-potoana varahina voasokitra teny an-tendrombohitra, toerana miavaka hotsidihina any Kapadokia. To sum it up, Cappadocia dia fonenan'ny toerana tsy ho hitanao na aiza na aiza eran'izao tontolo izao.
8. Toerana Indray Mandrakizay: Nanketo Alpes eto Soisa
Nanketo Alpes eto Soisa toerana tsy hay hadinoina na oviana na oviana isan-taona, fa amin'ny ririnina dia tena tsara tarehy izy ireo. Raha amin'ny lohataona sy ny fahavaratra dia afaka mankafy ny fitsangatsanganana sy ny fanatanjahan-tena ivelany ianao, amin`ny ririnina tokony hanandrana snowshoeing. Eny, Ny snowshoeing dia fanatanjahantena ririnina tsy manam-paharoa, ary miaraka amin'ny kiraro mety, azonao atao ny mikaroka bebe kokoa ny tontolon'ny Alpine.
Nanomboka nanodidina ny fanatanjahantena ririnina tsy manam-paharoa 6,000 taona lasa izay ary lasa malaza be any amin'ny Alpes Soisa misy ranomandry. Avy any Chamonix sy Mont Blanc ka hatrany Ecrins National Park, Afaka mankafy ny fomba fijery mahafinaritra indrindra amin'ny tendrombohitra ianao mandritra ny fanaovana snowshoeing. Raha fintinina izany ny, Ny Alpes Soisa dia fantatra amin'ny anarana hoe toerana misy lisitry ny siny, fa ny snowshoeing no nahatonga azy ho iray 10 toerana haleha indray mandeha amin'ny fiainana.
9. Patagonia, Arzantina
vongan-dranomandry, tampon-tendrombohitra mahafinaritra, ala, lagoons madio, Patagonia any Arzantina dia paradisa mandeha an-tongotra. koa, feno lalana sy fomba fijery mahafinaritra, ny valan-javaboarin'ny glacier ao Patagonia dia toerana iray indray mandeha amin'ny fiainana any Amerika Avaratra.
Ankoatry ny lalana an-tongotra mahazatra, Afaka miakatra ny ranomandry Rio Negro ny mpanao dia lavitra, ohatra. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, afaka mahita ny tenanao miakatra amin'ny mangatsiaka ianao, tendrombohitra misy lanezy ho an'ny adrenalinina sy traikefa miavaka. Ity dia iray amin'ireo zavatra miavaka azonao atao any Patagonia mahagaga.
10. Toerana Indray Mandrakizay: Japana
Indraindray eo anelanelan'ny tapaky ny volana martsa sy Aprily dia mamony amin'ny voninkazo serizy mavokely sy fotsy i Japana. Loko Kyoto ny voninkazo Sakura, Tokyo, ary tanàna hafa ao anatin'ny rivo-piainana mahagaga sy fahasambarana. Tsy azo lavina fa mampihomehy, mandritra ny voninkazo Sakura, Matory i Japana, ny fahatoniana manokana dia mandrakotra ny fiainana haingana any Japon. Ity atmosfera tsy manam-paharoa ity dia manintona mpitsidika an-tapitrisany mandeha any Japon mandritra ny fialantsasatra amin'ny lohataona.
Noho izany, raha toa ianao ka afaka mandeha lavitra amin'ny fotoana mahagaga, dia ny lohataona any Japon no fotoana tsara hitsidihana azy. Ankoatra ny fiezahana nahandro eo an-toerana, mitsidika tempoly volamena, ary ireo tranoben'i Tokyo manaitra ny saina, Ny fanaovana piknik eo ambanin'ny hazo Sakura dia traikefa indray mandeha eo amin'ny fiainana.
Izahay ao Save A Train dia ho faly hanampy anao handamina fitsangatsanganana amin'ireny 10 Indray mandeha In A Lifetime Destinations maneran-tany.
Te-hampiditra ny lahatsoratra bilaogy "10 Indray mandeha Amin'ny Fiainana Destinations" ao amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fonce-lifetime-destinations%2F – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)